ကြွက်ကတိုး - ဝီကီပီးဒီးယား
Muskrat ranges: Native မိတ်ဆက်ဒေသ တောင်အမေရိက၏ မိတ်ဆက်ဒေသကိုမပြသထားပါ။
Castor zibethicus လင်းနီးယပ်၊ ၁၇၆၆
ကြွက်ကတိုး (Muskrat)သည် မြောက်အမေရိကတိုက်၌ အများအားဖြင့် တွေ့ရသော ကတိုးနံ့ထွက်သည့် ကြွက်တမျိုးဖြစ်သည်။ ချောင်းကမ်းပါတို့တွင် တွင်းတူး၍ နေတတ်သည်။ ရေကူးအလွန် ကျင်လည်သည်။
ကြွက်ကတိုးသည် ၁ ပေခန့် ရှည်သည်။ ကိုယ်ပေါ်၌ တောက်ပြောင်သော အညိုရောင် သားမွေးများရှိသည်။ နောက်ခြေ ပြားသည်။ အမြီး ၈ လက်မခန့် ရှည်၍ အမွေးမရှိ။ ဦးခေါင်းသည်ကျယ်၍ လုံးသည်။ နားရွက်များသည် သေးငယ်၍ ဦးခေါင်း၌ ကပ်နေကြသည်။
ကြွက်ကတိုးသည် ဗီဗာဖျံများကဲ့သို့ သူတို့၏ နေအိမ်တွင် အခန်းကြီး အခန်းငယ် အမျိုးမျိုး ပြုလုပ်ထားကြသည်။ ထိုအခန်းများ၌ပင် သားမွေး၍ ဆောင်းရာသီကို ကုန်လွန်စေသည်။ နွေရာသီတွင် ရေကူးလိုက်၊ နေပူစာ လှုံလိုက်နှင့် တပျော်တပါး နေတတ်ကြသည်။ ရေ၌ပေါက်သော အပင်များ၏ အရိုးအမြစ်၊ အရွက်တို့ကို စားလေ့ရှိသည်။ အိမ်အနီးအနား၌ တွေ့သော အသီးအရွက်များကိုလည်း စားလေ့ရှိသည်။
ဆောင်းဦးပေါက်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဆောင်းရာသီ ခိုလှုံရန်အတွက် အိမ်ကို ပြုပြင်ဆောက်လုပ်လေ့ရှိသည်။ လူတို့သည် ကြွက်ကတိုးကို သူတို့၏ အိမ်မှ သားမွှေးရရန်အတွက် အမြောက်အမြား ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်မူ မရှိသလောက် ရှားပါးသွားသော ရှားပါးသတ္တဝါတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။
↑ Cassola, F. (2016). "Ondatra zibethicus". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T15324A22344525.en.
↑ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ-၂၊ အပိုင်း-ခ၊ နှာ-၂၉၃။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြွက်ကတိုး&oldid=715626" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။